Folo taona lasa izay ny vadiko sy ny zanakay lahy Marie Joel maty | Apg29
Fa ny pasana dia milaza fa samy maty Desambra 22, 2008. Ny fasana dia any an-ala Jönköping amin'ny Fasana. Tao am-pasana misy fotsy roa vatam-paty. Ny vata lehibe, ary vata kely izay mitsangana eo amin'ny lehibe.
Raha zava-niseho ireo, dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny alina lava indrindra. Izy io dia tena mampihetsi-po sy mampivarahontsana sy mampalahelo boky, fa manondro ny fanantenana mamirapiratra an 'i Jesoa Kristy. Mbola Afaka mahazo ny boky raha te mba hampiorenana. Ny vidin'ny 150 SEK. Tena mora vidy ka na inona na inona izay raisina eo amboniny. Ny boky dia manome fampiononana sy fampaherezana sy hevitra mba manantena an 'i Jesoa Kristy. Tsy tsara ihany koa evangelisationsbok. Vidio ho anao na hanome azy ny olona iray ho toy ny fanomezana.
Ny boky dia antsoina hoe Ny alina lava indrindra satria ny alina lava indrindra amin'ny taona sy ny alina lava indrindra teo amin'ny fiainako.
Avy amin'ny boky The lava indrindra Night
Dia nipetraka teo am-pandriana izahay, ary niasa tao amin'ny bilaogiko toerana. Tamin'ny iraika ambin'ny folo ora sy sasany alina. Teo alohako efa nametraka ny solosaina findainy eo amin'ny latabatra hazo kely mety hirodana. Afa-tsy Izaho no vady malalako sy ny lehibe kibony sy namaky ny teny tao amin'ny gazety. Ao amin'ny efitrano akaikin'ny efi-trano dia ny Dessan ka natory tao am-pandriany. Ny zava-drehetra nandry fahizay, teo am-pilaminana ny zava-drehetra, ary ny zava-drehetra dia tsara. Araka ny nanatona ny Noely no niara-niasa ny Noely sy ny Taom-baovao maro fiarahabana amin'ny fiteny samihafa araka izay te tao amin'ny bilaogy. Rehefa niasa teo amin'ny lisitra Marie voavalona-maso ny gazety ka nanao hoe:
"Tsy hiakatra any am-pandriana."
Marie snoring Ary ankehitriny, nony bevohoka be izy, ny snoring ratsy. Mba tsy hanelingelina ahy izy te-handeha ho any am-pandriana ao amin'ny efitra hafa. Lalàna efa namboariny ao amin'ny Hal lehibe kokoa mitovy tantana ka efa nataony tao akaikin'ny fandriana ny latabatra. Fa noho ny antony tsy mihevitra Marie no handeha hatory na dia any amin'ny efitra anio alina hafa.
"Tsy hijanona ianao?" Dia nanontany azy aho. Nanizingizina anefa izy fa te hatory ao amin'ny efitrano.
"Eny ary," hoy aho, "fa rehefa mandeha any amin'ny efitra fandroana azonao tsara Ho ato amiko, ka tsy mipetraka nandritra ny fotoana ela ny solosaina '' Eny, hataoko izany," hoy izy, nandao ny efitrano, ary nakatona ny varavarana.
Nanohy ny hanoratra ny lisitry ny Noely sy Taom-baovao ny fifandraisana lavaka izay nikasa hamoaka. Fa tsy misy nomena fa am-pilaminana io hariva indray mipi-maso dia niova tanteraka ny varavaran'ny efitrano fandriana rehefa nisokatra tampoka, taloha kelin'ny roa ambin'ny folo ora amin'ny alina, ary Marie niditra. Rehefa nanopy ny masony avy amin'ny solosaina lamba ka nahita Marie, nieritreritra aho tsara ô, tonga ny fotoana intsony.
Izany no tena zavatra farany hoy izy. Hoy izy hoe ny anarako amin'ny feo tena fitiavana, amin'ny fanahy sy tsara tarehy lalana. Ary raha izy nitampify ho an'ny kely. I Samy nahita sy nahalala fa mbola amin'ny fahoriana.
"Moa andro BB?", Hoy aho, raha mbola mbola sisa amin'ny solosaina eo amin'ny latabatra hazo kely.
Hoy izy hoe zavatra efa inaudible tamiko fa tsy afaka decipher ary nitampify kokoa, manenjana nandroso-mijaly. Nitsangana faingana aho, dia nandeha niakatra nankany aminy ka nandray satria tsy latsaka amin'ny tany. Dia nitondra azy ho any ny tongotry ny ny avo roa heny ny fandriana ka napetrany moramora teo amin'ny lafiny iray, raha mbola ao ny lohako aho nanomboka hitady ny telefaonina ny BB.
Rehefa nijoro teo am-pototry ny am-pandriana, teo anoloan'ny zaza ny fandriana dia izaho sy Dessan nataon'Andriamanitra tao mba tena mahafinaritra ka nanao Marie lainga manerana ny fandriana, dia niezaka ny tsy mitady na telefaonina maro amin'ny fahatsiarovana ho an'ny maro segondra mandra-Marie tampoka nanomboka rattle mafy amin'ny nasty gurgling sy ny feo na feo re. Tsy tena fantany izay hataony, fa sady mahay no nihevitra fa tsara ny hametraka azy ka teo am-parafara. I niondrika nandroso, nisambotra azy ka nametraka azy. Avy eo dia nidina avy Nikisakisaka-pototry ny fandriany ho any amin'ny tany aho raha mbola mihazona azy teo an-tsandriko.
Tsy azoko ary no izy, fa izay Marie maty teo an-tsandriko. Ny zavatra farany hoy izy dia ny anarako, satria izy maty teo an-tsandriko.
Ny alin'ny 22 Desambra, ny alina amin'ny ora maizina indrindra tamin'ny taona 2008, mijaly Christer Åberg Ny alina lava indrindra teo amin'ny fiainany, raha dia Mafy tokoa ny nanjo very sy tsy nampoizina ny antsasaky ny fianakaviany.
Ny tantara marina takatry ny saina ny fatiantoka sy ny hahazo izany rehetra izany.
Olona maro no efa nandre sy nahita ny fomba miahiahy mafy izy ireo, rehefa mamaky ny boky izy ireo, ny alina lava indrindra. Nanoratra toy izao ny olona iray tamiko:
"Tena tsara boky efa voasoratra. Rehefa nanomboka namaky azy io aho, tsy hitsahatra aho. Nanohina ahy izany."
Ny alina lava indrindra
Ny alin'ny 22 Desambra, ny alina sy ny ora maizina indrindra tamin'ny taona 2008, mijaly Christer Åberg ny fiainany sy ny maizina indrindra ny alina lava indrindra, fony izy Mafy tokoa ny nanjo very sy tsy nampoizina ny antsasaky ny fianakaviany.
Manaraka ny olona iray ny finoana tsy voahozongozona, ary ny finoana sy matoky ny tari-dalan'Andriamanitra sy hikarakara rehefa sanatria mitranga ny izao tontolo izao, ary tampoka raraka.
Ny boky dia mitantara ihany koa ny mafana tantaram-pitiavana momba ny Christer Åberg ny fikarohana ny amin'Andriamanitra, dia haniry ho velona-ela fitiavana sy ny nofin'i indray andro farany hahatsiaro ho tena tiana sy irina.
TANTARAN'I hala AVY alina lava indrindra
Ny voalohany dia mahatsiravina. I Nipetraka tany lehibe iray tohina ka tsy fantany ny fomba hiatrehana ilay toe-javatra, ary tsy fantatro ny fomba aho miatrika ny zanako vavy, izay vao niantso ka niantso ka niantso ...
Nataoko mihitsy no nanoro hevitra ny mpisorona efa nandrara ahy rehefa nanontaniana ny zavatra tiako hoy Dessan:
"Lazao amiko mihitsy tahaka ny. Tsy afaka ny hiarovana ny ankizy amin'ny zava-misy."
Ka dia nilaza Dessan fa maty i Neny, fa mbola tany an-danitra niaraka tamin'i Jesosy sy ny an-trano fa tsy ho avy intsony. Raha ny ankizy iray ao amin'ny akanin-jaza nanontany azy taty aoriana, izay nitoeran'ny vadiny reniny, dia hoy izy:
"Efa maty izy, ary momba an'i Jesosy any an-danitra."
Fa ankehitriny fotsiny ary dia nidradradradra nitomany. Tsy laitra izy ary tsy fantany izay ho ataony aho amin'ny tenako. Dia niditra tao an-efi-trano miaraka amin'ny Dessan teo an-tsandriko. Dia nidradradradra ka nandry ny tarehiny hamely ny sorony.
"Va aho hihira zavatra ho anao?" Dia nanontany azy aho.
"Eny", hoy izy tamin'ny feo mampalahelo ny ankizy.
Fantatro Dessan tiany ilay hira mahafinaritra Haleloia anao ato anatiko. Izy taloha maniry foana fa rehefa nanontany azy aho raha afaka mihira na inona na inona. Izy tsy noho ny anarany dia nataony hoe Haleloia hiainanareo ao ahy izy, fa foana izy hoe: "midera anao." Ary raha vao nampiasaina ny hoe "midera anao" Fantatro avy hatrany inona no hira izy holazaina. Dia hitako fa teo amin'ny hira. Tsy mifanaraka na ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Inona no tokony hataoko hihira? ", Hoy aho Dessan, resy lahatra fa naniry ahy mba hihira hira fotsiny izany.
Fa Gaga aho hoy Dessan mitomany vita:
Ny hala? Itsy Bitsy Spider? "Tsy misy na dia hira kristianina. Fa nihira azy io noho ny vavy, raha mbola tao aminy teo an-tsandriko Ivar trano lehibe.
Down tonga ny orana
manasa ny hala avy.
Up tonga ny masoandro
ritra ny orana rehetra.
Izany no tena ny toriteny ho ahy. Rehefa nihira ilay hira mba nandoko ny zava-nitranga tamin'ny hala tao an-tsaiko. Hitako ny fomba niady mafy mba mananika ny kofehy. Fa tampoka ny loza. Ny ranonorana ka lasan'ny rano ny hala. Fa avy eo dia tonga ny fahagagana - ny fahagagana! Niposaka ny masoandro ka maina ny orana rehetra toy izany koa ny hala naka herim-po, ka afaka nanomboka ny hihanika indray.
Toy izany koa, ny Dessan ary nijaly avy ny loza, fa ny masoandro i Jesosy, dia niakatra ka manome antsika herim-po vaovao, ka ny vaovao indray mafy mba miakatra indray izy.
Rehefa nihira izao fihirana izao niantso Dessan intsony.
- Jereo ny vidiny!
150 SEK / tsirairay
3 boky: 300 SEK
Swisha: 070 66 935 96
Kaonty banky: 8169 ny 5,303 725382-4
FANAMARIHANA: Ampidiro ny adiresy!
Ny boky nitondra folo volana hanoratra, fa dia tena mora ny mamaky ary mety tsara ho an'ny tanora na ho miakatra ny olona, ary koa ho toy ny fanomezana na evangelisationsbok !
Christer Åberg mipetraka any Meadow, akaikin'i Nässjö miaraka amin'ny zanany vavy maniry. Nandritra ny taona maro izy nihazakazaka iray amin'ireo bilaogy tsy miankina lehibe indrindra toeranawww.apg29.nu . Miasa koa izy amin'ny maha-evanjelista, ary mandray anjara amin'ny fihobiana, mozika sy ny fitoriana any am-pivoriana manerana ny firenena.
Ny boky dia navoaka tamin'ny Semnos ny mpitory.
Mitanisa ny alina lava indrindra
Pihetseham-po tsapako tsara ankehitriny, fa ny zava-nitranga ny alina lava indrindra foana hiaraka amiko. Fa tahaka ahy koa no nosoratany tao amin'ny boky: Raha tsy nisy i Jesosy, na oviana na oviana aho no nanao izany.